Ilya Kulikov (Monumentum), Kirill Konovalov, ဒင်းနစ်မြို့ပြနေဖြင့် IL 76 MD
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #574 by cruga
ငါ Rikoooo ကနေ addons အချို့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ငါသည်ဤ site ကိုပြုလေ၏ addons ရာပေါင်းများစွာတို့တွင်ရွေးချယ်ရေး၏အရည်အသွေးကြိုက်တယ်။
အကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံး download, Ilya Kulikov (Monumentum), Kirill Konovalov အားဖြင့်အသစ်သော IL 76, ဒင်းနစ်မြို့ပြဖြစ်ပါတယ်။
ငါကအကြီးအ addon ရဲ့ခံစားရပေမယ့်ကိုယ်ကအတည်ပြုရန်မတတျနိုငျဘူး။
အဆိုပါလေယာဉ်ပျံ loading ရက်နေ့တွင် စတင်. နှင့်လေယာဉ်ပျက်ကျစဉ်ကဝမ်းနည်းစရာငါ၏အ fs2004 ကြောင့်အချို့ဖိုင်နှင့်အတူပြဿနာကိုသတိပေးလိုက်သည်။
အဆိုပါပြဿနာကိုနာမ၌ Cyrillic ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူမော်ဒယ် folder ထဲမှာသူများဖိုင် related ပုံရသည်။
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #575 by Dariussssss
ငါကဘာသာပြန်ဆိုဖို့ရုရှားကမှအ FS2004.Without တစ်စုံတစ်ဦးကိုသုံးပြီးသောအခါငါနှင့်အတူတစ်ဦးတူညီပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်, ငါကသုံးစွဲဖို့တစ်လမ်းရှိပါတယ်စဉ်းစားကြဘူး။
ဒါဟာအတွက်အလုပ်လုပ်တယ် FSX ဒါပေမယ့်အသုံးပြုလမ်းမရှိသော ...
ဒါဟာတော်တော်လေးပေမယ့်အချို့သောအရာတို့ကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်အထိရုံကဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အားလုံးရုရှားလေယာဉ်နှင့်အတူအတူတူပါပဲ ... တိုင်းတစ်ခုတည်းအရာရုရှား၌တည်ရှိ၏။ ။ ။
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: cruga
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #576 by Gh0stRider203
2 နှစ်ပေါင်း 10 months ago #577 by cruga
သငျသညျ Dariussssss နှင့် Gh0stRider203 ကျေးဇူးတင်ပါသည်
တကယ်တော့ fs2004 စတင်သည်အခါ, ထိုဖိုင်များကို load မနိုင်ကပြောပါတယ် (ကအစား Cyrillic အက္ခရာ ??? ကိုအသုံးပြုသည်)
ငါလေယာဉ်များ loadthe ရန်ကြိုးစားသောအခါ, fs တူညီတဲ့အမှားတစ်ခုထို့နောက်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကသတိပေးလိုက်သည်။
ဒါဟာ correcty သူတို့အားဖိုင်တွေကိုကိုင်တွယ်လို့မရဘူးပုံရသည်။ သူတို့နာမအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဇာတ်ကောင်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ငါစာရေးဆရာများကတော့သူတို့အဖိုင်များကိုအမည်များနှင့်မှန်ကန်သော accordling အဆိုပါ .mdl file ကိုပြောင်းလဲပစ်သင့်သည်ဟုစဉ်းစားပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကို (Cyrillic ဇာတ်ကောင်ကူးယူနိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်) ပုံပြုပါရန်ကြိုးစား (သို့မဟုတ်အတိအကျအမှားမက်ဆေ့ခ်ျသတင်းပို့) နှင့်သူတို့အားဖိုင်တွေရဲ့စာရင်းကိုပွငျဆငျပါလိမ့်မယ်
ငါမကြာမီ back လိမ့်မယ်
1 months ago5တစ်နှစ် #1205 by Janne04
cruga wrote: မင်္ဂလာပါလူတိုင်း
ဘယ်သူ့ကိုမှတူညီတဲ့ပြဿနာရှိခဲ့ပါသလား Rachat prêt နှင့်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမျိုးကိုသိသလော
0.203 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်